စီးပွားရေး ဒိုင်ယာရီ (Dec 7,2018) | မာသင်
စီးပွားရေး ဒိုင်ယာရီ (Dec 7,2018)
ဘာမှ မယ်မယ်ရရ၊ ထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်၊
လေးလေးနက်နက်၊ ထဲထဲဝင်ဝင်၊ မလုပ်တတ်ဘူးလို့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲ။
အရပ်လေးမျက်နှာ နေရာတိုင်းကို ပစ်မယ် လို့ပြောတာဟာ…
ကိုယ့်ကုန်ပစ္စည်း/ဝန်ဆောင်မှုကို လူတိုင်းကို ရောင်းမယ် ဆိုတာဟာ
ဘယ်သူ့ကိုမှ ရည်ရွယ်ပြီးရောင်းတာမဟုတ်ဘူး လို့ပြောတာ နဲ့အတူတူပဲ။
လူတိုင်းကို ရောင်းလို့ရတဲ့ကုန်ပစ္စည်းဆိုတာ မရှိလို့ပဲ။
ကုန်ပစ္စည်းတိုင်း က ဈေးကွက်အသိုင်းအဝန်းကဏ္ဍတစ်ခု ကိုပဲ ရောင်းလို့ ရတယ်။
မားစီးဒီးကား က လူတိုင်းကို ရောင်းတာမဟုတ်ဘူး။
Bvlgari ရေမွေးက လူတိုင်းကို ရောင်းတာမဟုတ်ဘူး။
ငှက်ပျောသီးဆိုပေမယ့် .. အချို့က သီးမွှေးစားတယ်။ အချို့က ဖီးကြမ်းပိုကြိုက်တယ်။ အချို့က ငှက်ပျောသီးခြောက်ကြိုက်တယ်။ အချို့က ငှက်ပျောဆနွင်းမကင်း ကို ပိုကြိုက်တယ်။
ဈေးကွက် ကို က ကွဲပြားခြားနား နေတာ။
ကွဲနေတာကို ကွဲတဲ့အတိုင်းမြင်တာ အကောင်းဆုံးပဲ။
အကွဲအကြေတွေကို ပေါင်းစပ်ပြီးမြင် ကြည့်ချင်ရင်တောင် အက်ကြားကွက် ကို လက်ခံနိုင်ရမယ်။
သင့် လုပ်ငန်းအတွက် အင်မတန်မှ အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခု မေးပါရစေ။
သင့် ကုန်ပစ္စည်း / ဝန်ဆောင်မှု ကို……
ဘယ်သူ့ကို ရောင်းမှာလဲ ?
ဘယ်သူ့ကို ရောင်းမလဲ ဆိုတာ သိမှ … ဈေးကွက်ရှိလားဆိုတာ သိလိမ့်မယ်။
ဘယ်သူ့ကို ရောင်းမလဲ ဆိုတာ သိမှ…. အဲဒီဈေးကွက် ကြီးလား၊သေးလား သိလိမ့်မယ်။
ဘယ်သူ့ကို ရောင်းမလဲ ဆိုတာ သိမှ….အဲဒီ လူတွေကို ဘယ်လိုရောင်းမလဲ ဆိုတာ သိလိမ့်မယ်။
…..အဲဒီ လူတွေ ကိုယ့်ကုန်ပစ္စည်းကို လိုအပ်ချက်ရှိရဲ့လားလို့သိလိမ့်မယ်။
…..အဲဒီ လူတွေ ကိုယ်လို အခြားရွေးချယ်စရာ ကုန်ပစ္စည်း ရှိလား ဆိုတာ သိလိမ့်မယ်။
…..အဲဒီလူတွေ ကိုယ့် ကုန်ပစ္စည်းကို သုံးအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဆိုတာ သိလိမ့်မယ်။
…..အဲဒီလူတွေ အတွက် သင့်တော်တဲ့ဈေးနုန်း လား ဆိုတာ သိလိမ့်မယ်။
….အဲဒီ လူတွေ ကိုယ်ပစ္စည်းရောင်းတဲ့ဒေသမှာနေရဲ့လားလို့သိလိမ့်မယ်။
…. အဲဒီ လူတွေ ကိုယ်ရောင်းနေတာရောသိကြရဲ ့လားလို့တွေးလိမ့်မယ်။
သူတို့တွေ ကိုယ့် ကုန်ပစ္စည်းကို သိကြရဲ့လား ဆိုတဲ့မေးခွန်း ကို ၊
ကိုယ့်ကရော သူတို့တွေ ဘယ်သူလဲ ဆိုတာ သိရဲ့လား လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးခွန်းထုတ်ရလိမ့်မယ်။
ဘယ်သူ့ကို ရောင်းမှာလဲ ? ? ?
လွတ်လပ်စွာမျှဝေနိုင်ပါတယ်။ စာရေးသူအမည်လေးသာ ဖော်ပြပေးပါခင်ဗျာ ( မာသင်)